Laacibka Ugu Horreeya Ee Ka Tegaya Barcelona Oo Lasii Ogaaday Iyo Koox Albaabada Kasii Furtay – Latest Sports News
Laacibka Ugu Horreeya Ee Ka Tegaya Barcelona Oo Lasii Ogaaday Iyo Koox Albaabada Kasii Furtay
Barcelona ayaa dibu-dhis kale isku samaynaysa marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga, waxaana kusoo fool leh oo bisha June soo gaadhi doona da’yarka reer Netherlands ee Frankie de Jong oo uga iman doona Ajax oo ay bishii January kaga soo iibsadeen lacag ka badan 85 milyan oo Euro.
Sida uu qoray wargeyska Sport, marka uu Camp soo gaadho De Jong, waxan shandaddiisa ka qaadan doona laacib haddaba aan boos joogto ah haysanin oo aanu tababare Valverde kalsooni ku qabin.
Wargeysku waxa uu tilmaamay in Arturo Vidal uu noqon doono ciyaartoyga ugu horreeya ee ka dhaqaaqi doona Barcelona dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana uu ka degi doonaa waddanka Talyaaniga oo laga xiisaynayo.
Xiddiga reer Chile oo hore ugu soo ciyaaray Juventus, ayaa ku biiri doona Inter Milan oo wax qabadkiisa raadinaysa, hase yeeshee, Barcelona ayaan ka heli doonin wax lacag ah oo uu bilaash kaga tegi doonaa.
“Imaatinka De Jong, wuxuu khatar gelin doonaa Vidal oo hoos uga dhici doona heerka uu imika taagan yahay, waxaanu qaadan doonaa go’aan uu kaga tegayo Camp Nou si uu u helo waqti badan oo uu ciyaaro.” Ayuu yidhi wargeysku.
Ma-daalahan ayaa Barcelona uga soo wareegay Bayern Munich horraantii xili ciyaareedkan kaddib markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray Bayern Munich.